Izokhululwa nini i-Batman? Yazi Futhi Ngesakhiwo - Ukuzijabulisa
Izokhululwa nini i-Batman? Yazi Futhi Ngesakhiwo
Idethi Yokukhishwa Indaba Ye-Batman
Imibono mayelana nokuthi Yini Abantu Abayilindele ku-DC?
Ubani ongeyena umlandeli we-DC universe? Nginesiqiniseko sokuthi iningi lethu linjalo. I-Marvel ne-DC universe ayintshontshanga inhliziyo yezingane kuphela kodwa neyabantu abadala. Kodwa ucabanga ukuthi kungani ngikhuluma ngeMarvel? Kungenxa yokuthi kulesi sihloko ngizokutshela izinto ezithakazelisayo ngazoI-Batman.
Uyazi ukuthi iningi labalandeli be-Marvel baseqenjini lobudala 18-29 kanye 30-34 ? Njengoba kunesisho esithi, Ungalokothi uvumele ingane engaphakathi kuwe ife.
Uma ubheka labo balingisi, uzicabangela wena esikhundleni sabo ngalawo mandla amakhulu nengcebo. Omunye wezinhlamvu ezithandwa kakhulu endaweni yonke ye-DC ngu Batman , Bruce Wayne. Unamagajethi apholile, kuhlanganise naleyo nqola ecwebezelayo, engenza noma ubani abe nomona.
Kodwa unesikhathi esidlule esihlukumeza kakhulu futhi. Futhi okujabulisa kakhulu ukuthi ukuxazulula leyo ngxenye yendida, i-DC iza nefilimu entsha, I-Batman , njenge I-Aquaman Nombuso Olahlekile odlala noJason Mamoa (eyami intandokazi I-GOT-Game of Thrones izinhlamvu) nayo ihlelelwe ukuthi ikhishwe ngo-2022.
Ngicabanga ukuthi lokhu kuzoba ucezu olumangalisayo njengamanye amafilimu amaqhawe, Kwaphakade , Guardians Of Galaxy , futhi Ubuthi 2 .
Kuze kube manje, alukho ulwazi oluningi mayelana nokuthi yonke indaba izoba ngani, kodwa ngikuqoqele ulwazi. Onyakeni wakhe wesibili wokulwa nobugebengu, u-Batman wembula inkohlakalo e-Gotham City exhumene nomndeni wakhe ngesikhathi ebhekene no-Riddler, umbulali olandelanayo.
Uma ufisa ukwazi mayelana nokuthi Ubani isigebengu ku-Batman? Nansi-ke impendulo yakho U-Edward Nashton owaziwa nangokuthi u-Riddler kuzoba umuntu omubi. U-Riddler ungumbulali omusha osebenzisa izimfumbe ukuze agcone u-Batman kanye namaphoyisa. I-Batman's Riddler, ngokusho kukaReeves, ayifani nanoma yikuphi ukumelelwa kwangaphambili komlingiswa, futhi ukuvezwa kwakhe njengombulali olandelanayo kudonse ukufana kombulali weZodiac.
Ngo-2014, UBen Affleck kwakufanele kube yiBatman. Uphinde wahlela ukuqondisa, ukukhiqiza kanye nokubhala ngokuhlanganyela ifilimu. Kepha wesula esikhundleni njengomqondisi wababhali ngo-2017, kwathi uReeves wathatha indawo yakhe, eyaqala ukusebenza enguqulweni ye-batman encane. Kwathi ngo-2019, uBen Affleck wanqamula ubuhlobo bakhe ne-franchise. Endaweni kaBen Affleck, kwathathwa isinqumo sokulingisaRobert Pattinson,yebo ufunda lokho kahle, wethuTwilight Guy Edward Cullinguzodlala indawo kaBatman. Ngijabule kakhulu ngokubuka le movie manje. Kuthiwani ngawe?
IWarner Bros Pictures ihlela ukukhulula uBatman emdlalweni I-United States ngoMashi 4, 2022 . Ekuqaleni ibihlelelwe ukuthi ikhishwe ngoJuni 25, 2021, kodwa yabuyiselwa emuva ku-Okthoba 1, 2021, futhi yaphinde yafika ngoMashi 20, 2022, zombili izikhathi ngenxa ka-Warner Bros. Ukulungiswa kosuku lokukhululwa kwenziwa ngenxa ye-COVID- 19.
Zonke izigilamkhuba ze-DC multiverse zilungile; banobuntu nesimilo esithile. Bashiya umbono waphakade ezinhliziyweni zabantu. Abantu balindele into efanayo kuMdidiyeli.
Ngikholwa ukuthi umbangi uzogxila kakhulu kule movie kune-protagonist u-Bruce Wayne, kodwa lokho kuyingxenye yendaba.
Wonke umuntu angathanda ukwazi ngomndeni kaWayne, umcebo omkhulu abawuqoqile eminyakeni edlule, odluliswa ngokofuzo.Ngabe yonke imali ingcolile? Ingabe ibhizinisi likaWayne libi? Futhi lo wethu ozibiza ngoBatman, ongumnikazi weWayne Enterprises, uzimisele ukwenza okuhle kubantu. Ngabe leli bhizinisi belintshontsha abantu?
Ake sithi i-DC ihoxisa le movie ngokuxazulula le mibuzo ngendlela abantu abafuna ngayo, le movie izokhipha i-Box Officer. Kodwa isikhathi sizosikhombisa ukuthi le movie ibe yimpumelelo noma cha.
Uma ubusithanda lesi sihloko futhi ungathanda ukuhlala unolwazi olusha ezindabeni zokuzijabulisa noma ufuna ukwazi okwengeziwe ngochungechunge olusha oluzayo namamuvi kufanele uhlole ezinye izihloko zethu kanjalo. Siyaqiniseka kakhulu ukuthi uzobathanda bonke. Futhi, uma uneminye iziphakamiso ngathi, singathanda ukuzwa ngazo kumazwana.
Ngizobuya nesihloko esithakazelisa kakhudlwana. Kuze kube yileso sikhathi, GoodBye.
I-Westworld Isizini 4: Ingabe Ikhanseliwe Noma Ithola Isizini Entsha?
Stray: Ukudlala Njengekati Emhlabeni We-Cyberpunk!